Elena Sai dia mampiseho kalitao tsara amin'ny hosodoko nomerika | Famoronana an-tserasera
Ny sary nomerika an'i Elena Sai sy ireo tovovavy mampatahotra azy
Tsara vintana isika izao hiditra ny dingana famoronana amin'ny alàlan'ny YouTube nataon'i Elena Sai hianatra momba ny fomba fiasan'ity mpanakanto ity. Fahafahana tena tsara ho an'ireo izay nampianarin-tena izay mitady fomba hivoaran'ny teknikan'izy ireo ary hianaranao amin'ireo mpanakanto hafa izay tsy manafina ny fomba famoronany endrika mahatalanjona toa ireo nolokoin'i Sai.
Sai dia a mpanakanto monina any Okraina izay mampifaly anay amin'ny filan'ny nofo iray lehibe indrindra: mandoko tarehy vehivavy miaraka amin'ny maizina ianao. Maizina indrindra amin'ny sary an-tampontsika izay nahafatesan'ny vorona mahafatifaty izay azontsika an-tsaina amin'ny alà-dra izay mivoaka ny vavany.
Miaraka amin'ny teknika tena tsara amin'ny hosodoko nomerika, I Sai dia mitondra antsika alohan'ny mialoha mialoha ny zavatra omeny ao amin'ny Photoshop mba hahafahantsika mianatra ny amin'ireny kapoka kely tsy misy dikany ireny dia mamolavola ny faran'ny asany kanto izy.
Aiza avy eo ampidiro ny zoom handeha any amin'ny antsipiriany sy aloky ny rakitra ary fisaintsainana miaraka amina fikitihana an-kolaka sy borosy virtoaly voafantina tsara. Tena zava-dehibe io lafiny io, satria hahafahantsika mahatsapa akaiky kokoa ny asa, toy ny hoe teo alohan'ny taratasy sy arina isika.
Fikarohana mankany amin'ny hyperrealism noho ny kalitaony lehibe, saingy izany manodinkodina kely hanala zaza azy miaraka amin'ny zavatra mifanaraka amin'ny atao hoe fanoharana. Io zavatra io ihany koa no omen'ny fombany azy, zavatra iray tena ilaina ahafahana miavaka amin'ny tontolon'ny kanto, izay toa mora be daholo ny zava-drehetra. Ezaka be foana no takiana.
Manana ny DeviantArt anao ianao avy amin'ity rohy ity hanaraka ny asany tsirairay avy sy izay lazainy amintsika alohan'ny endrika kanto lehibe ilay iray manondro ny sanganasa nomerika tsirairay avy. Iray amin'ireo hosodoko hafa hanaraka azy ireo mba ho talanjona amin'ny fahaizan'ny Photoshop sy ny sary nomerika.
Aza adino Kura Huang sy ny «Saribakoliny».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary nomerika an'i Elena Sai sy ireo tovovavy mampatahotra azy
Ity ny tabilao an'ny iray amin'ireo fizarana amin'ny Game of Thrones